विचित्र संसार Archives - पावर संदेश
के भएछ मलाई?
के भएछ मलाई? मलाई केहि लेख्न आउदैन, कविता रे !? के हो "कविता" भन्या? कसरी लेखिन्छ, किन लेख्ने त्यो? 'बलत्कार बिरुद्ध' कविता लेखिएको दिन नै बेलुका आफ्नै बुबा द्धारा छोरी बलात्कृत भएकी कुसमाचार सुन्न पाईन्छ भने म किन लेख्ने थप यता
महेश्वर गौतम, काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा कार्यरत ३१ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रधान कार्यालयमा आइतबार ४ र मंगलबार २७ गरी ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी थप यता
यस्तो विद्यालय, जहाँ पढाइन्छ ‘डेटिङ शास्त्र’
एजेन्सी । आफ्नो प्रेमी प्रेमिकासँग डेटिङ जाँदा के गर्ने भन्ने बारेमा जान्ने÷सिक्ने चाहना धेरै किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूलाई हुनसक्छ । नहोस् पनि किन ? आखिर प्रेम सम्बन्धलाई दिगो रुपमा अघि बढाउनका लागि प्रभावकारी डेटिङको थप यता
पोखरा । पोखराको मणिपाल हस्पिटलमा एक महिलाले चम्ल्याहा बच्चा जन्माउनु भएको छ । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका १ की २६ वर्षीया सुनिता प्रधानले तीन छोरी र एक छोरालाई जन्म दिनु भएको अस्पतालका स्टार्फ नर्स लक्ष्मी श्रेष्ठले थप यता
बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात उठेन, बेहुला पक्षले ४ लाख जरिबाना तिरे
पुस १, झापा । विवाह मण्डपमा रहेकी बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात नउठेपछि बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई ४ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिरेका छन् । यो झापाको घटना हो । मंसिर २९ गते दिउँसोको लगनमा झापाको बुद्धशान्ति थप यता
जापान । जापानका केही कम्पनीले आफ्ना महिला कामदारलाई चश्मा लगाउन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। चश्मा प्रतिबन्धको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। स्थानीय मिडियाका अनुसार केही कम्पनीले महिला कामदारले चश्मा लगाउन नपाउने नियम लागू गरेका थप यता
कपडा लगाएकी महिलालाई नाङ्गै बनाइदिने एप
बीबीसी । तस्बिरबाट महिलाहरूको वस्त्र हटाएर नक्कली तस्बिर बनाउन मिल्ने दाबी गरिएको एउटा एपलाई त्यसका निर्माताहरूले बन्द गरेका छन्। पचास अमेरिकी डलर मूल्य राखिएको डीपन्यूड एपमाथि मदरबोर्ड नामको वेबसाइटमा लेख छापिएपछि थप यता